Oge opupu ihe ubi - barbecue-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Oge opupu ihe ubi - achicha
N’ụtụtụ ọnwa Mee, ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ada ada. N’oge opupu ihe ubi a, ngalaba anyị haziri ịmụrụ mmadụ ọrụ n’ọhịa, ma gaazie lobster azụ.
Ebumnuche nke ọrụ a abụghị naanị ohere dị mma maka mmadụ niile izu ike, kamakwa ọ bụ ezigbo oge iji pụọ maka ọmụmụ ihe. Ihe dị mkpa bụ otu esi etinye mmụọ otu n'ime ọrụ ma mepụta ikuku nke ndị ọrụ niile dị n'otu, na-arụsi ọrụ ike ma na-aga n'ihu.
Mgbe anyị rutere n’ọdụ ụgbọ mmiri ebe anyị na-aga, anyị kpochara ihe niile anyị zụtara ụnyaahụ ma bido ebe a na-eme achịcha. Ọ bụ ezie na teknụzụ anyị adịghị mma, anyị nwere ike ịme ya ihe na-atọ ụtọ mgbe anyị gbakọtara ọtụtụ ahụmihe. Ike gwụrụ nke a barbecue bụ anyị Allen. Dị ka ị nwere ike ịhụ na foto ahụ, Allen dị ka nna na-arụsi ọrụ ike nke nọ ọdụ n'akụkụ nri iji nye ụmụaka agụụ na-agụ nri.
Mgbe ahụ, anyị gara igbu azụ̀. Nke a bụ ọrụ ndidi. Mgbe anyị tinyere nko nri ụgbụ ahụ, ọ dị anyị mkpa ichere nwayọ nwa oge, a ga-ejide lobster ahụ, wee jiri nwayọ bulie nko ahụ wee jiri obere ụgbụ jide lobster ahụ, mana ọ bụrụ na anyị enweghi ndidi, mgbe ahụ Ogbe ahụ nwere ike ịgbapụ. Ọ dị ka ọrụ anyị, ọ chọrọ ndidi na nraranye iji nweta akara ule dị mma.
N’ikpeazụ, ọ bụ ezie na ike gwụrụ onye ọ bụla n’ime anyị, anyị ka na-enwe obi ụtọ ịlaghachi.
Previous: Laborbọchị Ọrụ Ọụ
Ọzọ: Akpa loading usoro